China 500ml Umswakama Isandla Isikhunta TECH-BIO ifektri abakhiqizi | Zhongrong
Ngaphansi kwethonya le-covid-19, Hand I-Sanitizer iba yisidingo sokuzinakekela kwethu empilweni yethu yansuku zonke ikakhulukazi kwezinye izindawo zomphakathi ezifana nesikole, isibhedlela, isuphamakethe, ihhotela, njll. Lo mkhiqizo uqukethe i-75% yotshwala engabulala i-coronavirus namanye amagciwane ukuvikela impilo yethu kahle. Iphakethe le-500ml lihle kakhulu ekusetshenzisweni komndeni futhi liphela cishe cishe isigamu senyanga. Njengoba sikhiqiza utshwala bento eluhlaza, intengo yethu izoncintisana nekhwalithi ephezulu yokuhlanzeka kwesandla sethu. Ngaphandle kwalokho, sidlulile ukuqinisekiswa kwe-CE, FDA, ne-ISO. Sethula umkhiqizoI-TECH-BIO ukuyenza ibe ngumkhiqizo onguNo. 1 wokwehlisa amagciwane eChina njengoba sinotshwala obusezingeni eliphakeme eChina. Singumholi eChina kubuchwepheshe be-ethanol. Sine cishe 500,000 square metres workshop endaweni esifundazweni Hebei, China. Inkampani yethu yasungulwa ngonyaka we-1999. Kodwa-ke, singamukela futhi i-OEM ne-ODM ngazo zonke izinhlobo zokuhlanza izandla. Ngibheke phambili ekubeni ngumlingani wakho womhlaba wonke futhi ufeze isimo sokuwina!
I-Net Volume: 500ml
Izithako Ezingasebenzi: Amanzi Ahlanziwe, ICarbopol, Isopropyl Alcohol, Triethanolamine, Iphunga.
Yiziphi izinto "ezivamile" elihlanzayo? Ingabe izobulala i-corona?
Siyabonga ngombuzo omuhle! Siqonda ngokuphelele ukuthi kungani ubuza lo mbuzo. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi i-FDA njengamanje ayivumanga noma imiphi imishanguzo, kufaka phakathi izinto zokuhlanza izandla, ukuvimbela noma ukwelapha i-covid-19. Sithatha isibopho sethu sokuqinisekisa ukuthi abathengi baya emthonjeni ofanele walolu hlobo lolwazi, ngakho-ke sikuqondisa kumawebhusayithi e-FDA noma e-CDC ukuze ufunde ngendima yabahlanzayo ekuvimbeleni ukusabalala kwe-COVID.
Siyabonga ngokufinyelela mayelana ne-TECH-BIO Moisture Hand Sanitizer! Zama ukucindezela phansi kupompo ngentende yesandla sakho bese uphendulela esiphambanweni ngokwewashi nomkhiqizo obheke kuwe. Iphampu kufanele ivele.
Langaphambilini Isicoci Sandla se-OEM
Olandelayo: I-50ml Hand Sanitizer Gel TECH-BIO